I-Hill Street Blue "i-Thrill Seeker Lodge"
Ngaba ujonge indawo entsha yokuhlala eDerby, eye yakhiwe ngokwesiko, kwaye iyilwe ngabakhweli be-MTB abayiqondayo into ebalulekileyo kwiintsapho nakumaqela amakhulu?
Ngaba uyafuna ubunewunewu obuncinci, ubhetyebhetye, kunye nokhetho malunga nokuba loluphi ubungakanani bendawo yokuhlala oyifunayo?
Wamkelekile kwi-Hill Street Blue! Sibonelela ngeendlela ezintathu ezintsha zokuhlala eDerby, eTasmania.
I-Thrill Seeker Lodge - ilala 8; I-Sendit Lodge- ilala isi-6, kwaye i-Havinago Lodge- ilala ezi-6
Incwadi zontathu okanye kanye into oyifunayo!
I-Thrill Seeker Lodge-Le ndawo intle, entsha kraca enamagumbi okulala amathathu inezinto zokupheka zala maxesha, iairconditioning kunye nokufudumeza iinkuni zangaphakathi. Amalungiselelo okulala aqwalaselwe ngokucokisekileyo kunye neebhedi ezingatshatanga ze-XL ezinokudityaniswa kunye kwabo bathanda ukugquma!
Ukulala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezisi-8 unokukhetha uhlengahlengiso lokulala ukuze luhambelane neemfuno zakho:
Ngokumalunga nokuphumla, awuyi kuyazi into omawuyenze kuqala emva kosuku lwakho lokukhwela! Ngaba uhlala ujikeleze umlilo ovuthayo kunye nosapho kunye nabahlobo betshintshiselana amabali okanye ngaba utsibela ngqo kwibhafu etshiswa ngamaplanga nge-bevy efunyenwe kakuhle? Mhlawumbi nenza nobabini? Nantoni na oyikhethayo uya kukonwabela ukuhlala kwakho kwi-Thrill Seeker Lodge!
Ubuhle bendawo yokuhlala yase-Hill Street Blue kukuba ungabhukisha i-Thrill Seeker Lodge kunye nezinye iikhabhinethi zethu ezikwisiza ukuba uneqela elikhulu eliza kuhlala kulo! Khangela "Thumela iLodge" kunye ne "Havinago Lodge".
Kuninzi ekufuneka kwenziwe, ngaphakathi nakufutshane eDerby! Kwezinye iintsuku, akukhona nje ngeebhayisekile! Sele uyazi malunga neendlela ezikumgangatho wehlabathi eDerby/St Helens, kodwa ngaba ukhe wayizama igalufa kwindawo eyaziwayo yehlabathi iBarnbougle Golf Links? Kuphela yimizuzu engama-40 ukusuka eDerby, kwaye sinokukufumana apho ngenkonzo yethu yokudlulisela yabucala!
ITasmania ikwanakho ukutya newayini esemgangathweni kweli lizwe! Kanye apha kuMntla Mpuma weTasmania! Singakunceda ube namava eendawo zethu zokuthengisa iwayini kunye nemveliso entsha!
Umamkeli zindwendwe uHelen noTim ngabemi basekuhlaleni abafumanekayo ngalo naluphi na uncedo olufunekayo.
Inombolo yomthetho: 2019/28 469046819527